छाउ प्रथा भर्सेस तिज |
छाउ प्रथा भर्सेस तिज
प्रकाशित मिति :2018-09-04 13:35:37
प्राज्ञ कैलाश राईले हालै एक कार्यक्रममा भनिन् ‘मैले तिज, पञ्चमी, छुत, अछुत भन्ने चाहिँ काठमाडौं टेकेपछि थाहा पाए ।’ पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको ठूलोदुम्माकी कैलाशले २०५५ सालमा काठमाडौं टेकिन् ।
राणाकालिन समयको पूर्व ४ नम्बर माझ किरातकी छोरी उनी । आफूलाई प्रकृति पुजक मान्ने किरातीहरूका लागि तिज र पञ्चमी मान्ने चलन दुई दशक अघि थिएन । अहिले पनि अपवाद बाहेक छैन ।
सरकारले महिलाहरूको महान पर्व भन्दै तिजमा महिलाहरूलाई सार्वजनिक छुट्टीको समेत दिन्छ । यही तिज कार्यक्रमकै लागी कैलाशले छिमेकमा ५-६ सय रुपैयाँ समेत जम्मा गरिसकेकी छन् ।
यो उनको चाहाना त होइन । तर छरछिमेकलाई स्विकार्नै पर्ने बाध्यताले उनी बिमुख हुन सकिनन् । उनले यसरी काठमाडौंलाई झेलेको पनि दुई दशक भएछ ।
काठमाडौं आएपछि नै किन त ? भोजपुरको त्यो दुर्गम गाउ“, जहा“ दुई छाक टार्न दिनरात नंग्रा खियाउनुपर्छ । उसै पनि किराती समुदाय चेतना र आर्थिक स्तरमा पछाडि मानिन्छ ।
तिज भनेको ‘कुन चरिको नाम हो’ भन्ने खालका मानिस अहिले पनि छन् गाउ“घरमा । आफ्ना कुल पितृ पुज्न चारदाना चामल जुटाउन नि निकै धौधौ पर्ने गाउ“घरमा न तिज, न पञ्चमी । यस्तै समुदायबाट आएकी कैलाशको कथा यति नै । अब चर्चा गरौं तिजकै ।
महादेव शिवलाई पति पाउ“ भनि पार्वतीले निराहार उपवास बसेकै कारण शिव पाएको र यही मान्यताअनुसार तिज मनाउन थालिएको पौराणिक कथाहरूमा पढ्न पाइन्छ ।
सांसद अञ्जना विसुखेंकै अनुभवमा पनि तिज उबेलादेखि मनाउन थालिएको थियो । मुखमा एक थोपो पानी नहाली व्रत बस्ने चलन त्यो बेला नि थियो । तर यति चर्को, भड्किलो थिएन ।
‘आमा हजुरआमाहरू मनाउनुहुन्थ्यो, तामझाम थिएन,’ उनी भन्छिन्, अहिले पुजीवाद हाबी भएको छ र यसले महिलालाई नै सक्ने काम गरेको छ ।’ उबेलाका तिज गीतहरूमा प्रगतिशिल भाव झल्कन्थे । वेदनाका कुराहरू समेटिन्थे । मौलिकतामा रमेका हुन्थे आमा, दिदीबहिनीहरू । अहिलेको तिज भने होटल, रेस्टुरा, डिस्को र बारमा परिणत भएको छ । ’
गुफा बसेकै ठाउँमा मृत्यु भए कोही पुरुषले हेर्न नहुने र गुफाभित्रै खाल्डो खनेर गाड्नु पर्छ भन्नेसम्मको चलन थियो । अधिकारकर्मीहरू यसलाई सुदूर र मध्यपश्चिममा महिनावारी हुँदा गोठमै राख्ने छाउ प्रथाभन्दा नि खतरनाक भन्छन् ।
अञ्जना व्यङग्य गर्दै भन्छिन्, ‘तिज त अचेल हो, संस्कृतिका रुपमा मौलाएको, पुजीवादी सहरदेखी दुरदराजका गाउँसम्म संस्कृतिका रुपमा मौलाउदै गएको ।’ तिजको भड्किलोपनालाई विकृतिका रुपमा विरोध गर्नेहरूका सामु उनी ‘संस्कृति’ भनेर विरोध गर्छिन् ।
तिज आउन एक महिना बाँकी हुदैदेखि महिलाहरूलाई दर खान भ्याइनभ्याइ छ । हुनेखाने महिला र महिला कर्मचारीहरूलाई महिनाभर हरियो, रातो, पहेलो पहिरन पहिरिने प्रतिस्पर्धा चल्छ । तिजमा मञ्च खडा गरेर औपचारिक कार्यक्रम गर्ने चलन उबेला थिएन । पछिल्लो समय तीब्र रुपमा बिकास हुँदै गएको संस्कृति हो अञ्जनाको भाषामा ।
सिद्धान्त र अध्ययनहरूलाई आधार मान्ने हो भने हरेक दिन विश्वमा एकचौथाई महिलाहरू महिनावारी हुने अवस्थाका हुन्छन् । एकजना महिलाले आफ्नो जीवनमा तीन हजार दिन कुनै न कुनै बहानामा ‘अछुत’ हुनुपर्छ । १० हजार दिन महिनावारी हुँदा बहिस्कृत हुनुपर्छ । हरेक महिलाहरू ५ देखि ७ दिन अछुत भएर बस्नुपर्छ ।
देशकै केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा कोठे छुत-अछुतको व्यवहार त झनै भयानक छ । सदियौंदेखि बस्दै आएका तागाधारी र नेवार समुदायमा यस्तो कुरीति अझ बढी भयानक छ । छोरीहरूलाई महिनावारी हुनुअघि १२ दिनसम्म गुफा राख्ने चलन छ ।
त्यसबेला कुनै पुरुषलाई हेर्न हुँदैन । गुफा बसेकै ठाउँमा मृत्यु भए कोही पुरुषले हेर्न नहुने र गुफाभित्रै खाल्डो खनेर गाड्नु पर्छ भन्नेसम्मको चलन थियो । अधिकारकर्मीहरू यसलाई सुदूर र मध्यपश्चिममा महिनावारी हुँदा गोठमै राख्ने छाउ प्रथाभन्दा नि खतरनाक भन्छन् ।
छाउ प्रथा विरुद्ध सरकारले कानुन बनाएको छ । हाम्रै सरकारले पोर सालसम्म त पञ्चमी तिथीमा व्रत बस्नकै लागि महिलाहरुलाई बिदा पनि दिन्थ्यो ।
अर्थात वर्षभरी महिनावारी भएका बेला भए गरेका पाप पखाल्न व्रत वस्नकै लागि विदा पाउँथे महिलाहरु । र खुसीको कुरा हो अधिकारककर्मीकै विरोधमा यसपटक सरकारले ऋषी पञ्चमीको विदा कटौती गरेको छ । महिनावारीमा भएका पाप पखाल्न महिलाहरुले व्रत वस्न छुट्टी पाउनेवाला छैनन् ।
संविधानमा महिलाको हक सम्बन्धी स्पष्ट उल्लेख छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानतापूर्वक बाँच्न पाउने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार उल्लेख गरेको छ ।
महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने, पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी पुर्वसदस्य धनकुमारी सुनार ऋषी पञ्चमीको विदा कटौतीस् गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको बताउँछिन् ।
युवा नेता मानुषी यमि भट्टराई तिज महिलालाई दोस्रो दर्जामै राख्ने आधार भएको दावी गर्छिन् । तिजका विरुद्ध खुलेर बोल्छिन् । तर भदौ नलाग्दै तिजको दर खाने निम्तो आएको उनले सुनाइन् ।
तिजको तामझाम सहरमै हुन्छ । सुरुमै कैलाशले भनेजस्तो । मान्दै नमान्नेलाई पनि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष तिजले प्रभाव पार्छ सहरले, समाजले । पहिले हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाहरूको महान पर्व भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले नेपाली महिलाहरूको भनिन्छ । यसले गर्दा सबै समुदायका महिलालाई तिजको रमझमले छोएको छ ।
नेताले नै नाचेपछि ‘हामी किन ननाच्ने ? किन नमानाउने तिज ?’ यसरी सबै समुदायका सबै महिलाहरूमा तिजले तताउँछ । यसरी विकास हुँदै आयो, हिन्दु धर्मावलम्बी महिला हुँदै नेपाली महिलाहरूको महान चाड तिज ।
आदीवासी जनजाती समुदायहरूमा व्रत नबसे पनि दर खाने चलन एक महिनाअघि देखि नै सुरु हुन्छ । रंगीबिरंगी पहिरन पहिरिने चलन नि उही छ । हजुरआमाका पालालाई भन्दा नि आमा, दिदीहरूको पालामा मनाउन थालिएको तिज अहिलेका युवतीहरूको पाला ‘फेमस’ बन्दै गएको छ ।
अध्ययन, जागिर र व्यवसायको क्रममा सहर बसेर गाउ“ पुगेका महिलाले सिकेको तडकभडकलाई गाउ“मा पनि जस्ताको त्यस्तै नक्कल गर्ने र गाउँले दिदीबहिनीहरूमा देखासिकीले गर्दा अञ्जनाको शब्दमा ‘संस्कृति’का रुपमा मौलाउदै आएको छ ।
केहि प्रगतिशील महिला अगुवाहरू यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने अभियानमा त छननै । पञ्चमी व्रतको पुजा गर्ने दिन टपराभरी मासुका परिकार खाएर विरोध जनाएका विगत ताजै छन् ।
राजनीति देश बदल्ने गतिलो माध्यम भन्दै आइरहेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वका महिलाहरू पनि सामेल नभएका होइनन् । तर अल्पमतमा परेपछि धुमिल भइदिन्छन्, यस्ता अभियान ।
मानुषी यमीले भनेजस्तै कसले चाडो तिजको कार्यक्रम गर्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा मौलाउदै जान पे्ररित गरेको छ । राजनीतिक संगठनहरूमा नेतृत्व गर्ने धेरै हिन्दु धर्मावलम्बीका नै हुन्छन् । उनीहरूले कार्यक्रम गरेर नाचेपछि, रमाइलो गरेपछि संगैको नेवार, राई, मगर, गुरुङ पनि सामेल हुनैप¥यो ।
जनजाती समुदायमा यतिसम्म भैसक्यो कि, व्रत नलिए पनि तडकभडक गर्ने, खाने र लाउने चलन बढेको छ । निम्न वर्गको परिवारमा पनि तिजको बेला ऋण काढेरै भएनि भान्सामा मासु पकाउने चलन छ ।
सरकारमा अहिले नेकपाको नेतृत्व छ । जसले समाजवादी, भौतिकवादी, प्रगतिवादी दर्शनलाई मान्छ । महिला पुरुष समानताको कुरा गर्ने । तर लोग्नेको आयु बढ्ने नाममा तिजको व्रत बस्नु अघि दर खान नेकपाकै महिलाहरुलाई पनि भ्याइनभ्याइ छ ।
‘नेकपाले गाउ“–गाउ“बाट संघर्ष गरेर सरकारमा आएको भन्ने त पत्याउनै सकिदैन,’ लेखक युग पाठक भन्छन् । यदि पञ्चमी व्रतलाई फाल्ने हो भने तिजलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क सान्दर्भिक छ ।
नेपालमा हरेक दिन तीन जना महिला पुरुषबाट बलात्कृत भइरहेका छन् । यही भदौ २९ गते महिलाहरू तिजको निराहार व्रत बस्नेछन् । शिवलिंगको धुमधाम पुजा गर्नेछन् । यसले फेरि पनि महिलाहरुमा पुरुषकै प्रति भक्तिभाव दर्शाउ“छ । महिलाहरू दोस्रो दर्जाकै हुन भन्ने प्रमाणित गराउँछ ।
तसर्थ महिला र पुरुषको हैसियत समान छ भन्ने कुरामा विश्वास छ गर्नेहरुले तिजकोव्रत किन बस्ने ? किन खाने तिजको नाममा दर ? किन लगाउँने ऋण निकालेर महंगा लुगा र गहना ? के महिलाले व्रत बस्दैमा पुरुषको आयु लम्बिने हो र ? कुन दुनियामा छौं हामी ? हामी किन बुझ्दैनौं कि कसैले भोको बस्दैमा कसैको आयु लम्बिने होइन ।
त्यसकारण हामी महिला र पुरुष समान छौं, समान हुनुपर्छ । मान्छे–मान्छेबिचको समानता नै देशलाई संसारमा चिनाउने आधार हुन्छ । हामी त्यही आधार खडा गर्न जुट्नुपर्छ ।
(लेखक राई कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् ।)